Shiinaha Neodymium Fluoride NdF3 Soo-saar iyo Warshad | Liche
Neodymium Fluoride (NdF3), Purity≥99.9% CAS No. Waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa in lagu sameeyo alwaax Nd - Mg, muraayad, muraayad iyo capacitors, qalabka magnetka. Neodymium Fluoride waxaa badanaa loo isticmaalaa muraayadaha, muraayadda iyo kaabayaasha, waana waxyaabaha ugu muhiimsan ee ceyriinka lagu sameeyo ee loo yaqaan 'Neodymium Metal' iyo 'alloys'. Neodymium wuxuu leeyahay koox xoog leh oo wax nuugta ...
Neodymium Fluoride (NdF3), Nadiif ≥99.9%
CAS Maya.: 13709-42-7
Miisaanka Molecular: 201.24
Barta dhalaalida: 1410 ° C
Neodymium (III) Fluoride, oo sidoo kale loo yaqaan 'Neodymium Trifluoride', waa dhisme ionic crystalline ah. Waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa in lagu sameeyo alwaax Nd - Mg, muraayad, muraayad iyo capacitors, qalabka magnetka.
Neodymium Fluoride waxaa badanaa loo isticmaalaa muraayadaha, muraayadda iyo kaabayaasha, waana waxyaabaha ugu muhiimsan ee ceyriinka lagu sameeyo ee loo yaqaan 'Neodymium Metal' iyo 'alloys'. Neodymium wuxuu leeyahay faashad xoog leh oo udub dhexaad u ah 580 nm, taas oo aad ugu dhow isha indha bini'aadamka heerka ugu sarreeya ee xasaasiga ah taasoo ka dhigaysa mid waxtar u leh muraayadaha indhaha ee muraayadaha alxanka. Waxaa sidoo kale loo adeegsadaa bandhigyada CRT si kor loogu qaado farqiga u dhexeeya casaanka iyo cagaarka. Waxaa si aad ah loogu qiimeeyaa soosaarka muraayadda midabkiisa midabkiisu wanaagsan yahay ee buluuga ah ilaa muraayadda.
- muraayad, muraayad iyo capacitors
- macdanta biraha neodymium iyo neodymium
- muraayadaha ilaalinta ee muraayadaha indhaha
- bandhigyada CRT
Hore: Lanthanum Fluoride LaF3
Xiga: Samarium Fluoride SmF3